Smoothies ukunciphisa umzimba. Izilumkiso xa usitya Discover ➡ Discover Online ▷ ▷️
Smoothies ukunciphisa umzimba. Amanyathelo okhuseleko xa usitya
Idume phakathi kwabantu abafuna ukunciphisa umzimba, ukushukuma kubangela impikiswano enkulu. Emva kwayo yonke loo nto, ngaba banokukunceda ukunciphisa umzimba ngendlela esempilweni?
1 Ngaba ukushukuma kuluncedo ekunciphiseni ubunzima?
2 Ungakufaka njani ukungcangcazela kukutya kwakho
3 Izinto ezingalunganga ngokusetyenziswa rhoqo kweLight Weight Lakes
Ngaba ukushukuma kuluncedo ekunciphiseni ubunzima?
La malungiselelo enziwa ngeedosi zecarbohydrate, iiproteni, intwana yamafutha, ifayibha, iivithamini kunye neeminerali. Banomxholo wekhalori osezantsi kwaye babonelela ngemvakalelo yokuhlutha.
Ezi ziselo zinokusebenza, kunye nokunye ukutya okubandakanya isithintelo sekhalori kwisidlo sakho.
Nangona kunjalo, ulumkisa ukuba iinyikima akufuneki zisetyenziswe endaweni yokutya. Naluphi na uhlobo lokutya okubalekayo kukutya okutsha kunye neendlela zokutya ezinamashishini kunye nezenziweyo akunampilo kwaye kufuneka kuthintelwe. Kufuneka sihlale sikhetha iimveliso ezingasetyenziswanga ngumzi mveliso.
Ungakufaka njani ukungcangcazela kukutya kwakho
Ukusetyenziswa kokugungqiswa akuyomfuneko ukunciphisa umzimba, kodwa ukuba uyafuna, ngoncedo lwesondlo unokubandakanya iziselo kwisicwangciso sakho semihla ngemihla.
Ngokubalulekileyo, oku kufuneka kwenziwe ngendlela eyongezelelweyo xa kutyiwa. Ukunciphisa umzimba empilweni, umgaqo uhlala udibanisa ukutya okunezondlo, kunye nokutya okwenyani, kunye nomsebenzi oqhelekileyo womzimba.
Isiselo sinokusetyenziselwa izidlo ezinje ngesidlo sakusasa, isinongo okanye ukugqiba isidlo sangokuhlwa, kodwa akufuneki sityiwe ngaphezu kwesinye ngosuku.
Kukwafanelekile ukunikela ingqalelo kwiileyibhile zezi mveliso ukujonga ukwakheka kwazo, uninzi luthanda ukuba noxinaniso oluphezulu lwee-carbohydrate kunye neeproteni ezimbalwa, ukongeza kwisigcinisi kunye nezinye izongezo zemichiza.
Izinto ezingalunganga ngokusetyenziswa rhoqo kweLight Weight Lakes
Ukusetyenziswa kwexesha elide kwee-smoothies kunokuba yingozi kwimpilo. Sele zikhona izifundo ezibonisa iziphumo eziyingozi. Omnye wabo uphazamisa ukusebenza kwesibindi. Ikwabangela ukwenzakala ekuhlaleni kuba ukutya akuseyonxalenye yobomi bomntu.
Iti eluhlaza okanye iti emnyama, yeyiphi esempilweni?
NgoFebruwari 22, 2020
Iti yeparsley, izibonelelo kunye neepropathi
NgoFebruwari 20, 2020
Ubisi lweAlmond, yintoni, izibonelelo kunye neresiphi?
NgoFebruwari 18, 2020
Ngaba uyafuna ukunciphisa i-cholesterol yakho? Yitya iavokhado
Imbewu kajongilanga, izibonelelo kunye nendlela yokuzibandakanya ekutyeni?